17 / 09 / 2021 17 / 09 / 2021 မင်းသမီး Emma Kennedy 356 Views စာ4မှတ်ချက် ဘီလ်ဒန်, ကြောကျတိုငျ, မင်းသမီး Emma Kennedy, Lego, LEGO House, ဥပဒေ, LEGOLAND ဝင်ဆာ, LEGOLAND ဝင်ဆာအပန်းဖြေစခန်း, သဘော, အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါ
စာရေးသူ၊ ဇာတ်ညွှန်းနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပရိသတ် Lego Emma Kennedy က သင့်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကလေးတွေ တွဲနေစရာမလိုဘူးဆိုတာ သက်သေပြနေပါတယ်။ ဥပဒေ.
ပြောမထွက်တဲ့ စည်းမျဉ်းတစ်ခု ရှိတယ်။ ဥပဒေ အကယ်၍ သင့်တွင် အနည်းဆုံး ရေခဲမုန့် လိမ်းကျံထားသော ကလေးတစ်ဦးရှိလျှင် သင့်အား စေးကပ်နေသော လက်နှစ်ချောင်းဖြင့် ဆွဲထုတ်ပါ။ ၎င်းသည် အခြားသော ပန်းခြံများနှင့် သက်ဆိုင်ပုံမပေါ်သော စည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းသွားချင်တယ်လို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြောပါ၊ AFOL မဟုတ်တဲ့သူက မျက်လုံးတွေကို ကျဉ်းစေပြီး "ဒါပေမယ့် မင်းဘယ်သူ့ကလေးတွေကို ယူမှာလဲ" လို့ မေးမယ်၊ ရုတ်တရက် ဇီးကွက်ညို ဒါမှမဟုတ် ကင်းထောက်ခေါင်းဆောင် ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသလိုမျိုး၊ နေ့ချင်းပြန်ခရီးတွင် ကျောင်းသူကလေးများကို ခေါ်ဆောင်ခြင်းကို နှစ်သက်သည်။
ဒါပေမယ့်မှာ အုတ်တွေနဲ့အနားယူပါThor ၏ Hammer ဖြင့် စည်းကမ်းစာအုပ်ကို ဖြိုခွင်းပြီး အပိုင်းအစများကို လေထဲသို့ ခွဲထုတ်ပြီး အငွေ့ပြန်စေပါသည်။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၊ ငါတို့သွားမယ်။ ဥပဒေ သူငယ်ကိုမမြင်ရ။
ငါတို့ AFOLWAC (လူကြီးပရိတ်သတ်တွေအတွက်) စီစဉ်ပြီးပြီ Lego Chums ကဘယ်သူလဲ) နေ့ချင်းပြန်ခရီးအတွက်အချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီးငါတို့အားလုံးကိုရူးရူးမူးမူးချစ်ခဲ့တာ Legoရွေးချယ်မှုတစ်ခုသာအမြဲရှိလိမ့်မည်။ တစ်နေ့ငါတို့ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Valhalla, the ခရီးကိုသွားမယ် Lego Billund မှာ အိမ်၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့မင်္ဂလာနေ့မတိုင်ခင်အထိ၊ ငါတို့ဟာ ခမ်းနားတဲ့ခန်းမတွေဆီကို ဘတ်စ်ကား၊ ရထားနဲ့ ကားနဲ့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။ LEGOLAND ဝင်ဆာ. ၎င်းသည် ရေကိုစမ်းသပ်ပြီး၊ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော ဘောက်ဆာတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကာ ကျွန်ုပ်တို့ကို တကယ့်အသားတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခွင့်ရစေမည်ဖြစ်သည်။
ငါတို့က မူးနောက်နောက်နဲ့ သင်္ဘောသားလို့ ပြောရတာက အောက်တန်းကျတဲ့ စကားပဲ။ တက်လိုက်ကျလိုက် ခုန်ပေါက်လိုက်၊ ပွေ့ဖက်ရင်း (သူတို့ကို မှတ်မိသေးလား)၊ ညင်သာစွာ အော်ဟစ်ပြီး ဝမ်းသာမျက်ရည်အနည်းငယ်ကျသည်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီအိမ်သာရှေ့မှာ ဆယ်ဖီရိုက်ရင်း ရပ်နေခဲ့တယ်။ ငါတို့သွားပြီးတော့ လုပ်လိုက်တာပဲ။ ငါတို့မှာ ဥပဒေနေရောင်က တောက်ပနေပြီး ငါတို့ကိုင်ထားသမျှ အိတ်တွေက ထမင်းထုပ်တွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်။ စိတ်ချမ်းသာနေပြီ၊ ငါတို့တောင် မဝင်ရသေးဘူး။
သင်ဟာအရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ချစ်တတ်သည် Legoသွားစရာကလေး မလိုဘူး။ ဥပဒေ. သင်လိုအပ်သမျှမှာ ဧရာမရုပ်သေးရုပ်ကြီး၊ ရောင်စုံမော်ဒယ်တိုင်း၊ Miniland ၏အုတ်တိုင်းကို မြတ်နိုးပြီး မည်မျှအငြင်းအခုံဖြစ်မည်ကို မတွေးဘဲ သဘောကျမည့် စိတ်တူကိုယ်တူ မိတ်ဆွေများသာ လိုအပ်ပါသည်။ ဥပဒေ-သီးသန့် အစုံလိုက်ဖြင့် အိမ်ပြန်ရန် လက်ခံနိုင်သည် ။ (ဖြေ : မင်း အိမ်ရှေ့တံခါးကို ခိုးဝင်နိုင်သလောက် မိုက်မဲလိုက်တာ။)
ဒါလေးဖတ်လို့ကောင်းတယ်!! ငါ့နှစ်ယောက်နဲ့ ငါသွားမယ်။ friends ပန်းခြံက တန်ရင် ငါတို့ကြောက်တယ်။ ဒီစာကိုဖတ်ပြီးရင် အခုပဲသွားလိုက်ပါ 😀